Resy indray e!
2007-06-18 @ 06:43 in Spaoro
Ny fampahalalam-baovao ambava sy antsary dia mitovy fiteny. Zavatra mahazatra tsinona no holazaina. Ny mpakafy faraparany ity taranja baolina fandaka ity dia tsy ny faharesena na ny fandresena loatra no nandrasany fa ny hoe hahatafiditra baolina sa tsia. Tsy niraharaha izay isan’ny baolina niditra intsony ireo fa ny notadiaviny dia ny hoe hitoko ihany ve ireto ekipem-pirenena ireto. Tsy nahazo fahafaham-po tamin’izany ry zareo. Ny tena loza aza dia nahenan’ny mpanazatra indray ny isan’ny mpanafika tamin’ny fidirana faharoa hampidirana fiarovana. Tsy azon’ny mpijery baolina io nefa efa manenjika isa isika tamin’izay fotoana izay. Midika izany fa tsy fantatry ny mpanazatra izay nandrasan’ny mpijery na tsy mitovy mihitsy ny fisainan’ny mpanazatra sy ny mpijery. Baolina 14 izany no niditra tamintsika malagasy tamin’ity fifanianana Can 2008 hatao any Ghana ity nefa tsy nahatafiditra baolina mihitsy isika na dia iray aza. Resy 0 noho ny 2 manko isika tao Mahamasina omaly. Tsy te-hanoratra lava intsony ity tranga ity aho na dia be aza ny tian-ko lazaina.